Download cs 1.6 dikan-teny tsy etona ► Counter Strike 1.6 Download
Aprily 21, 2022	Off	By roma
Counter Strike1.6 dia fanavaozam-baovao amin'ny lalao mpitifitra olona voalohany malaza Half-Life 1, izay mora nahita fahombiazana maneran-tany ho iray amin'ireo lalao an-tserasera malaza indrindra. Tamin'ny voalohany, ity lalao ity dia nalaza afa-tsy tamin'ny ampahany kely amin'ny vondrom-piarahamonina filokana sy mpamorona, saingy nahavita ho lasa mpitifitra 3D farany tao anatin'ny fotoana fohy.
Counter strike 1.6 Navoaka ho mod maimaim-poana ho an'ny Half-life mba hanomezana mpilalao ny traikefa Multiplayer tsara indrindra amin'ny fotoana amin'ny karazana lalao sy sarintany samihafa. Amin'ny fomba lalao, ny tsara indrindra dia ny fomba fandroahana baomba, izay tsy maintsy mamboly baomba na mamono ireo mpikambana ao amin'ny ekipa mpanohitra ny mpampihorohoro raha tsy maintsy miaro ny tranokalan'ny baomba na mamono ny mpampihorohoro rehetra ny CT.
The counter strike 1.6 Nijanona teo amin'ny lohatenim-baovao nandritra ny fotoana ela be, fa ny famoahana ny lalao mpitifitra olona voalohany dia naka ny lohateny tamin'ny counter strike. Saingy mbola tian'ireo tia counterstrike faratampony izany noho ny lalao hafa noho ireo sarintany, basy ary fizika ireo, fa ny hafa kosa tia azy satria manana solosaina ambany izy ireo ary tsy mahazaka anaram-boninahitra vaovao.
Counter strike 1.6 tsy mampiasa loharanom-pitaovana be loatra, eny fa na dia amin'ny firafitry ny sary avo lenta aza. Ny lalao dia azo jerena ao amin'ny fivarotana lalao etona ofisialin'ny lalao, saingy tonga miaraka amin'ny vidiny lafo ho an'ny lalao roapolo taona. Ny sasany dia tsy afaka mandoa vola fotsiny amin'ny lalao tany am-boalohany, fa ny hafa kosa tsy tia mandoa vola amin'ny lalao tranainy toy izany, ka ity dikan-teny tsy misy rano ity counter strike 1.6 no safidy tsara indrindra ho azy ireo.
Miaraka amin'ity dikan-teny ity dia afaka mahazo traikefa mitovy amin'ny dikan-teny etona amin'ny lalao izy ireo nefa tsy mandany vola na ariary. Misintona fotsiny ary mametraka ny lalao, safidio ny lohamilina tianao ary vonoy ireo mpampihorohoro ireo. Izy io dia ahitana tarehin-tsoratra valo samihafa, efatra ho an'ny ekipa mpampihorohoro ary efatra ho an'ny ekipa miady amin'ny fampihorohoroana. Tsy misy famerana ny tarehin-tsoratra, ka ny ekipanao dia afaka misafidy toetra mitovy na toetra hafa.
Tamin'ny voalohany, ity version nonsteam ity counter strike 1.6 dia natao ho an'ny rafitra fiasan'ny Windows taloha ihany, saingy efa nohatsaraina izy izao mba hiasa tsara amin'ny rafitra fiasana farany toy ny Windows 8 sy Windows 10, sns. Ny dikan-karama dia tsy malaza amin'ny vondrom-piarahamonin'ny lalao satria mampiseho doka na dia mandoa vola aza ny mpilalao. ny mari-pandrefesana, raha ny dikan-teny tsy misy etona kosa dia tsy mampiseho doka na dia maimaim-poana aza.
Izy manontolo Download ary ny fametrahana ny lalao dia mila telo ka hatramin'ny efatra minitra raha manana fifandraisana Internet tsara ianao, ary afaka manomboka milalao avy hatrany. Tsy mila miditra kaonty na mamorona kaonty ianao raha te handray anjara amin'ny iraka famonjena takalon'aina na iraka hafa.
Misy iraka famonjena takalon'aina izay nisamboran'ny mpampihorohoro sivily tsy manan-tsiny, ary eo am-pelatananao ny ainy. Manaova paikady, manangona ekipa iray, manafika ny tranobe ary manavotra sivily amin'ny vidiny. Hahazo loka vola ianao isaky ny fihodinana azonao, ary afaka mividy entana tsara kokoa miaraka aminy ianao.
Tagscounter strike 1.6 Download cs cs 1.6 cs 1.6 Download Download Download counter-strike 1.6 Download cs 1.6 dikan-tsy etona lalao Antsasak'aina tsy etona -tserasera malaza Valve